Maguta Mapatya, MN
Tiri kutsvaga PA kugadzikana nezvinhu zvakaita sekutyaira, kuchengetedza vafambi kubva pakufamba nepfuti, kubatsira kufambisa giya, et cetera. Iyo gig inogona kusanganisira kubatsira kamera dhipatimendi nezvimwe zvinhu zvakapusa, asi hapana chikuru.
Iyi pfuti idiki boka-inotora Covid kuchengetedzeka zvakanyanya, uye yakanaka vibes chete!
ZUVA: Kubvumbi 12-13
NZVIMBO: Twin Cities, MN nharaunda
CHITSAUKO: $ 120/10
PROJECT: Diki bhajeti pfupi firimu
ZVINOSANGANISIRA: kutyaira, kuva nemotokari ndiko kuwedzera
Kana uchifarira, ndokumbira utumirezve yako uye pfupi meseji nezve iwe.
Previous: Urarame Kugadzira Murongi
Zvadaro: Mutevedzeri Mutevedzeri